Faah faahin:- Qaraxii saakay ka dhacay afaafka hore ee dekeda magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qaraxii saakay ka dhacay afaafka hore ee dekeda magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Qaraxaan ayaa sida la sheegay ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay afaafka hore ee dekeda magaalada Muqdisho, gaar ahaan laanta qeybta lagu qaado canshuuraha dekeda.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaan ku geeriyootay 15 qof, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan, waxayna dadka waxyeelada soo gaartay ay u badnaayeen dad ku sugnaa goob maqaayad ah oo ku taalo agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay.
Dad goob-joogayaal ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in qasaaraha dhimasho ay kor u dhaafeyso 15 qof, dhaawacana uu intaasi ka badan yahay, islamarkaana dadka waxyeelada soo gaartay ay u badan yihiin dad shacab ah oo fadhiyay maqaayadda.
Muuqaalo laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinaaya in burbur aad u xoogan uu soo gaaray goobta maqaayadda ah, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dadka waxyeelada ugu culus soo gaartay.
Qaraxaasi ayaa la sheegayaa inuu bar-tilmaameedkiisu ahaa laanta canshuuraha ee dekeda, halkaasi oo ah goobta gaadiidka looga qaado canshuuraha.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo badan oo ka kala tirsan booliska iyo kuwa nabad-sugidda Soomaaliya, waxayna halkaasi islamarkiiba ka bilaabeen baaritaano culus oo ay ku ogaanayaan sida ay wax u dhaceen.
Dhinaca kale, saraakiisha nabad-sugidda gobolka Banaadir oo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegay inuu jiro qasaare lixaad ah balse aysan si rasmi ah weli u xaqiijin karin inta uu qasaarahaasi gaarsiisan yahay, ayna dib kasoo sheegi doonaan wixii tafaasiil dheeraad ah.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxa saakay ka dhacay afaarka hore ee dekeda magaalada Muqdisho ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay ciidanka nabad-sugidda qaranka ay duuleedka Muqdisho ku fashiliyeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo damacsanaa in qarax looga fuliyo gudaha magaalada Muqdisho.